इमेल चलाउँदा कस्ता कुरामा ध्यान दिने ? जान्नुहोस् - Everest Dainik - News from Nepal
इमेल चलाउँदा कस्ता कुरामा ध्यान दिने ? जान्नुहोस्
काठमाडौं । इमेल चिठीपत्रको आधुनिक रूप हो । जसबाट हामी सन्देश गोप्य रूपमा एक–अर्कामा पु-याउन सक्छौँ । चिठीको तुलनामा इमेललाई निकै अनौपचारिक तथा बढी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ । प्रायः कार्यालयको काममा इमेलको प्रयोग बढी हुने गर्छ । आजकल धेरै मानिसले इमेल प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । तर, कतिपय स–साना कुरामा ध्यान नदिँदा अप्ठ्यारो भोग्नुपरिरहेको हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस के कारणले गर्दा संसारभरि जिमेलमा यस्तो समस्या आइरहेको छ ?
–इमेल लेख्दा कहिल्यै पनि ठूलो अक्षर (क्यापिटल लेटर) मा लेख्नुहुँदैन । ठूला अक्षर प्रयोग गर्दा कराएको वा ठूल्ठूलो स्वरले बोलेको भन्ने अर्थ लाग्छ ।
–इमेलमा सब्जेक्टको ठाउँ कहिल्यै खाली छोड्नुहुन्न । सब्जेक्ट नलेख्दा विशेषगरी कार्यालयको काममा धेरै इमेल प्राप्त गर्ने मानिसलाई सूचना मिलाएर राख्न गाह्रो परिरहेको हुन्छ ।
–इमेल फर्वार्ड गर्दा अरूलाई असर पर्ने/नपर्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । प्राप्त गर्ने मानिसलाई तपाईंले जथाभावी पठाएको मेल टाउकोदुखाइसमेत बन्न सक्छ ।
–ठूल्ठूला अट्याचमेन्ट भएका मेल पठाउनु हुँदैन । यस्ता इमेल कम भण्डारण गर्ने क्षमता भएकाहरूले प्राप्त गर्न नसक्ने र पढ्दा पनि झर्को लाग्ने हुन सक्छ ।
–पठाउनुभन्दा पहिला एकपटक जाँच्नुपर्दछ । यदि स्पेलिङ गल्ती भएमा अर्थको अनर्थ लाग्न सक्छ । किनकि, इमेल एकपटक पठाइसकेपछि रद्द गर्न मिल्दैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट